ဥရောပထိပ်သီးလိဂ်ငါးခုတွင် အိမ်ကွင်းအကောင်းဆုံးအသင်းအဖြစ် ဘယ်အသင်း ရပ်တည်နေလဲ? – Play Maker Sports Journal
ဥရောပထိပ်သီးလိဂ်ငါးခုတွင် အိမ်ကွင်းအကောင်းဆုံးအသင်းအဖြစ် ဘယ်အသင်း ရပ်တည်နေလဲ?
ယနေ့မှာကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာအိမ်ကွင်းရလဒ်အကောင်းဆုံးဥရောပထိပ်သီးလိဂ်ငါးခုမှအသင်းများစာရင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။လာလီဂါထိပ်သီးများဖြစ်ကြတဲ့အက်သလက်တီကိုနှင့်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်တို့ကဥရောပမှာအိမ်ကွင်းရလဒ်အကောင်း ဆုံးအသင်းများအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။
CIES Football Observatory ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဥရောပမှာကိုဗစ်ကာလအတွင်းအိမ်ကွင်းပွဲအားလုံးအနိုင်ရရှိတဲ့အ သင်းအဖြစ်နှစ်သင်းတည်းဘဲ ရပ်တည်နေကြောင်းသိရပါတယ်။နော်ဝေထိပ်သီးဘိုဒို/ဂလမ့်(၁၅ပွဲတွင်၁၅ပွဲနိုင်)နှင့်စ တီဗင်ဂျရတ်ကိုင်တွယ်နေတဲ့ရိန်းဂျား(၁၂ပွဲတွင်၁၂ပွဲနိုင်)တို့ဘဲရှိပါတယ်။
ဥေရာပထိပ္သီးလိဂ္ငါးခုတြင္ အိမ္ကြင္းအေကာင္းဆုံးအသင္းအျဖစ္ ဘယ္အသင္း ရပ္တည္ေနလဲ?
ယေန႔မွာကိုဗစ္ကာလအတြင္းမွာအိမ္ကြင္းရလဒ္အေကာင္းဆုံးဥေရာပထိပ္သီးလိဂ္ငါးခုမွအသင္းမ်ားစာရင္းထြက္ေပၚလာပါတယ္။လာလီဂါထိပ္သီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့အက္သလက္တီကိုႏွင့္ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္တို႔ကဥေရာပမွာအိမ္ကြင္းရလဒ္အေကာင္း ဆုံးအသင္းမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။
CIES Football Observatory ရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္အရဥေရာပမွာကိုဗစ္ကာလအတြင္းအိမ္ကြင္းပြဲအားလုံးအႏိုင္ရရွိတဲ့အ သင္းအျဖစ္ႏွစ္သင္းတည္းဘဲ ရပ္တည္ေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။ေနာ္ေဝထိပ္သီးဘိုဒို/ဂလမ့္(၁၅ပြဲတြင္၁၅ပြဲႏိုင္)ႏွင့္စ တီဗင္ဂ်ရတ္ကိုင္တြယ္ေနတဲ့ရိန္းဂ်ား(၁၂ပြဲတြင္၁၂ပြဲႏိုင္)တို႔ဘဲရွိပါတယ္။
လင်ဂတ်အား အငှားဖြင့် ခေါ်ယူရန် ဝက်စ်ဟမ်းအသင်း ဆွေးနွေးနေ